Ama-mandarine kanye nama-lemons angowomndeni wezithelo ze-citrus. Igama lesi-citrus libolekwa olimini lwesiLatini futhi asho lutho olungaphezu komuthi kalamula. Ngokuqondile indawo yokuzalwa ye-lemon ayichazwa, nakuba eChina yayiziwa eminyakeni engaba ngu-4000 edlule. Okubaluleke kunayo yonke kwakubhekwa njengokuqukethwe okukhulu kwe-vitamin C, kodwa ububanzi bezinto eziwusizo ze-lemon babanzi kakhulu. Ososayensi abacwaningi baye babonisa indlela okwakhiwa ngayo okuhlukahlukene, futhi izimfanelo zalo zokwelapha cishe ziqukethe izinkwanekwane. Futhi ijusi eliqukethwe ku-pulp yayo, futhi ikhasi layo lisetshenziselwa izinjongo zokwelapha.
Izinhlobo ze-leme zihluke kakhulu futhi ziyahlukahluka ngezici ezihlukene, zinobukhulu obukhuni futhi obuncane. Isikhumba sabo sinothile kakhulu emafutheni abalulekile, futhi emgqeni welamula, enamanzi angama-90%, aqukethe amavithamini nama-acids soluble yamanzi. Njengephesenti, ukuba khona kwe-malic ne- citric acid, kanye ne-pectin, i-potassium, ithusi, i-carotene, ithusi, amavithamini B, C no-P.
I-Vitamin C ithuthukisa imithi yokuzivikela, yingakho isincomo sokuthatha ilamula ekwindla, ebusika nasentwasahlobo sishiwo. Ngokusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlobo lwe-ulamula, ukuphumula kuyashesha ngezifo ezinjenge-allergies, rheumatism, isifo sofuba. Ngokushesha uphulukise ama- fractures, amanxeba avulekile futhi ashise. Ungumuthi omuhle we-helminths.
Emashalofini anikezwe ama-lemons ahlukahlukene, asekhulile, kokubili enhlabathini evamile nasendlini. Ngokuvamile ungakwazi ukuhlangana nePavlovsky - ngezithelo ze-oval futhi cishe ukhonjiswe. Lo mmele wohlobo oluthile lwamakhemikhali, unikeza izithelo ezingaba ngu-30 ezivela emthini owodwa. Ngokunakekelwa okufanele, ukugcina zonke izincomo, awukwazi nje ukukhula njalo ulamula kulefestile, kodwa futhi ukhule nabo. Olunye uhlobo oluvame kakhulu yi-Urals. Naphezu kwegama layo, bayakhula futhi ekhaya.
Amakhemikhali ahlukene ekamelo amelela i-Maykop lemon. Izithelo zawo ziyi-130-140 amagremu, zinomumo ohlangene futhi owenziwe kancane esimweni esingaphansi. Well fruiting. I-Tashkent ye-lemon ekhethiwe kakhulu neyiphundu enomzimba we-orange nesikhumba esincane. Ukukhethwa okuphezulu okukhethiwe kwe-lemon Kursk enesikhumba esincane.
Futhi izinhlobo ze-lemons zithandwa ngokungenangqondo, ezithandwayo phakathi kochwepheshe bezocansi, ezakhiwe e-Italy, ilamula leMasipala. Enye i-lemon ethandwayo yi-Novogruzinsky noma, njengoba nayo ibizwa nangokuthi, i-Novo-Athos enefomu elandisiwe lezithelo kanye nokunambitheka okumnandi.
Omunye ummeleli wezithelo ze-citrus, ovame ukuhlotshaniswa namaholide omnyaka omusha - i-mandarin. Igama layo lingenxa yeChina lasendulo. Ama-mandarine lapho abiza abantu abacebile kakhulu, ababekhona ngaleso sikhathi, lezi zithelo. Izinhlobo eziningi zama-mandarine zafika eYurophu eminyakeni eyi-16-18. Ekuqaleni, njenganoma yisiphi isithelo esingavamile, sakhula ezindaweni zokugcina izithombo, futhi lapho evulekile emazweni anemimoya emnene.
Kuyathakazelisa ukuthi zonke izithelo ze-citrus ezibomvu, ezibomvu nezibomvu zibizwa ngokuthi ama-mandarins e-orange esifundeni saseRussia. Nakuba, njengezinhlobo, kuhlanganisa izinhlobo eziningi. Njenge-orange, unezinhlamvu. Ngakho izinhlobo ze-mandarins nazo zimeleleke kakhulu. I-fetus eyinkimbinkimbi ihlobene nobukhulu bayo, ibumnandi.
Ama- mandarins amahle aseMorocco, anezinambitheka ezimnandi kakhulu, kunenzuzo eyodwa eyodwa - bayabanjwa. Ama-mandarins aseTurkey anesayizi efanayo, kodwa nge-acidity elula kanye nokuba khona kwembewu. Izintandokazi kulokhu okunambitheka - ama-mandarins aseSpain, enesayizi enkulu, umbala obala obala obala, obunzima obunamafutha, obuningi obuhlanjululwe kalula nenani elincane lembewu. Ngokuyinhloko, izithelo zomnandi ze-mandarin ziyadliwa zisetshenziswe futhi zisetshenziswe kumasaladi noma izithasiselo ekudleni njengezithako.
Umndeni wezithelo ze-citrus awunamncintiswano ngezinto eziwusizo, ngakho-ke uzidle impilo!
Inkinga oluthandwa: agumenti. Inkinga oluthandwa ekuphileni kwebantfu
Abangane beqiniso wafunda usenkingeni futhi injabulo.
Umbala "Quartz": ordinariness banal noma Minimalism esisebenzayo?